Apple wuxuu bilaabayaa iibinta Mophie Qalabka cusub ee lagu soo oogay Qalabka | Wararka IPhone
Isku daygii Apple ee dhicisoobay ee ahaa inuu abuuro xaruntiisa qalab-ka-qaadashada wireless-ka ah ee aaladaha kala duwan leh ayaa sababay in qalabkan noocan ahi ku bataan bakhaarrada internetka iyo kuwa jirka. Saldhig keli ah oo dib loogu cusbooneysiiyo iPhone-kaaga, AirPods iyo Apple Watch waa shayga rabitaanka dad badan, iyo Apple oo ka warqabta tan ayaa bilaabay inay ku iibiyaan dukaankooda rasmiga ah.
Kuwani waa gaar ahaan moodooyinka cusub ee ay soo saartay Mophie, oo hadda laga heli karo oo keliya qaar ka mid ah waddamada Yurub, oo leh qaab casri ah oo aad u casri ah oo noo oggolaanaya inaan dhammaan qalabkayaga isla mar ku buuxino. Laba saldhig, midkoodna leh fiilo isku dhafan oo ah 'Apple Watch', oo si hubaal ah noo xusuusinaysa kuwii ay bilaabeen Nomad dhawr bilood ka hor.
Waxa ugu xiisaha badan saldhigyadan ayaa ah midka isku xidha laba aag oo lacag la'aana oo fiilo leh oo loogu talagalay Apple Watch. Hal god oo loogu talagalay seddex aag oo lacag la'aan ah, laba ka mid ah ayaa ah 7,5W iyo midka kale ee loogu talagalay Apple Watch. Saldhigga kale wuxuu kaliya leeyahay laba aag oo lacag la wirelessaan ah, oo aan lahayn aag Apple Watch ah, laakiin taa beddelkeeda waxay na siineysaa dekedda USB-A si aan uga soo buuxino aalad kale, sida Apple Watch. Qiimaha saldhiga koowaad waa € 149,95, kan labaad xoogaa wuu ka jaban yahay € 109,95.
Waqtigan xaadirka ah waa saldhigyada kaliya ee noocan ah ee aan ka heli karno Apple Store khadka tooska ah, laakiin maahan kuwa kaliya ee ku jira qaybtooda. Nomad wuxuu bilaabay aasaaskiisa guuleysta, kaas oo Mophie-kan shaki la'aan lagu dhiirrigeliyey, iyo waxa aan ka heli karno Mishiinada € 139 (oo saldhig u ah Apple Watch) iyo € 99 (oo leh USB-A 7,5W iyo USB-C Power Delivery 18W). Haddii aad haysatid aalado dhowr ah oo la jaan qaadi kara wireless-ka oo aad rabto meel aad ka wada buuxiso dhammaantood adoo isticmaalaya fiilo fudud, ma jiro wax ka fiican oo ka wanaagsan noocyada xeedho ee noocan ah. Ama waad sii sugi kartaa inta Apple sugayso inay soo bandhigto taada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Apple wuxuu bilaabayaa iibinta Mophie saldhigyada cusub ee qalabka lagu rakibo